We.com.mm - သင့်မျက်လုံးတွေ ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းနည်း (၅)မျိုး
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါးဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ကျန်းမာနေစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်မျက်လုံးတွေကို အနားမပေးပဲ မနေပါနှင့်။ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေဟာ သင့်မျက်လုံးတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ အစာများကို စားသောက်ပါ
ကျန်းမာတဲ့မျက်လုံးတွေဟာ သင့်ပန်းကန်ပေါ်က အစားအစာတွေဆီမှ စတင်ပါတယ်။ အာဟာရကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် - စီ၊ ဗီတာမင် - အီး၊ အိုမီဂါ ၃ အက်စစ် တွေဟာ အမြင်အာရုံ နှင့် ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ မျက်စိတိမ်စွဲရောဂါ နှင့် အမြင်ချို့တဲ့စေနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကျန်းမာနေစေဖို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ဆဲလ်မွန်ငါး၊ တူနာငါးနှင့် ကြက်ဥ၊ဘဲဥ၊ မြေပဲ၊ ပြောင်းဖူး၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ပဲ၊ လိမ္မော်ရည် နှင့် တခြားအချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့အသီးဖျော်ရည်တွေ၊ ကမာကောင်တွေ စသဖြင့် ဗီတာမင် ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေ များများ စားပေးရမှာပါ။ ဒါမှာသာလျှင် သင့်မျက်လုံးတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပြီး အားကောင်းစေမှာပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ မျက်လုံတိမ်စွဲရောဂါကို ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင် ဦးနှောက်အာရုံကြောကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်မျက်လုံးတွေ ကျန်းမာစေနိုင်ဖို့အတွက် ဆေးလိပ်ကို ဖြစ်နိုင်လျှင် ဖြတ်လိုက်ပါ။
3. နေရောင်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ မျက်မှန်တပ်ပါ
နေရောင်မှာပါလာတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဓာတ်ဟာ မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေပြီး ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် နေကာမျက်မှန်ဟာ သင့်မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
4. အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ မျက်စိအကာအကွယ်ပစ္စည်းကို သုံးပါ
အလုပ်ခွင်မှာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်စေတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းကိရိယာကို ကိုင်တွယ်တော့မယ်ဆိုရင် မျက်လုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ မျက်မှန်မျိုး၊ အကာအကွယ်မျိုးသုံးပေးပါ။ အားကစားတွေထဲမှာ ဟော်ကီရိုက်ခြင်း၊ နံရံရိုက်တင်းနစ် အားကစား၊ တုတ်သံသုံးပြီးဘောလုံးဖမ်းနည်း စသဖြင့် ကစားနည်းတွေဟာလည်း မတော်တဆ မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာ ဒါမှမဟုတ် အားကစားကစားရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် သင့်မျက်လုံးတွေကို ကာကွယ်လိုက်ပါ။
5. ကွန်ပျုတာဖန်သားပြင် နှင့် နည်းနည်းဝေးအောင်နေပြီး အသုံးပြုပါ
ကွန်ပျူတာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်း တွေကို အချိန်အကြာကြီး အသုံးပြုခြင်းဟာ မျက်စိကိုက်ခဲခြင်း၊ မျက်လုံးဝါးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ ပခုံးနာခြင်း စသဖြင့် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သင့်မျက်လုံးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းသုံးတော့မယ်ဆိုရင် စူးရှပြီး မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အလင်းရောင်ကို ကာကွယ်ဖို့ မျက်မှန်တပ်ပါ။ သုံးနေရင်းနဲ့ သင့်မျက်လုံးတခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ မိနစ် ၂၀ လောက် မျက်စိတွေကို အနားပေးလိုက်ပါ။ ပေ ၂၀ လောက် ရှိတဲ့ အကွာအဝေး ကို ငေမောကြည့်နေလိုက်ပါ။
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါးဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ကျန်းမာနေစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ရေသောက်ပျင်းတဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး (၅) ချက်…
သင့်သွားတွေကိုပုံမှန်မတိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်လာနိုင်မယ့်အရာ (၅) ခု…။
ဝိတ်ချရန်အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း5သွယ်
အရွယ်တင်နုပျိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို အမြဲတမ်းလုပ်ပါ
ကတက်ပင်တစ်ပင်လုံးက ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုလို့ရနိုင်